मिर्गौला दिवस : यस्तो छ डा. अरुण सेढाईको रोग पहिचान,रोकथाम र उपचार – .:: Welcome to Saurahaonline.com
मिर्गौला दिवस : यस्तो छ डा. अरुण सेढाईको रोग पहिचान,रोकथाम र उपचार
डा.अरुण सेढाईचितवन, फागुन ३० । मिर्गौला मानव शरीरको संवेदनशील अङ्ग हो। यसको मुख्य काम हाम्रो शरीरभित्रका अनावश्यक पदार्थलाई पिसाब मार्फत बाहिर फाल्ने हो। यसले शरीरमा रगतको मात्रालाई समेत सन्तुलनमा राख्ने, शरीरमा रगत बनाउने हुँदा मिर्गौला महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा रहेको छ।
बदलिँदो जीवनशैली, खानपान, मोटोपनले गर्दा पछिल्लो समयमा युवा अवस्थामानै मिर्गौला रोग देखा पर्न थालेको छ। नेपालमा वर्षेनी मिर्गौला रोगीको संख्या बढिरहेको छ। नेपालमा मिर्गौला रोगबाट पीडित कति छन् भन्ने यकीन तथ्याङक नभए पनि करिब ३० लाख मानिसमा मिर्गौला सम्बन्धी केही न केही रोग भएको अनुमान छ।
३० लाखमध्ये ३ लाख मानिसलाई मिर्गौलाको गम्भीर खालको समस्या छ र करिब ३० हजारको मिर्गौला पुरै बिग्रिएको छ। त्यसमध्ये ३ हजारको प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अथवा नियमित रुपमा डायलासिस गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले डायलासिस गर्नुपर्ने मिर्गौलारोगीलाई नि: शुल्क डायलासिस गर्ने व्यवस्था गरे पनि मिर्गौला रोगीको संख्या बढिरहेका छन्।
विरामीलाई रोग लागि सकेपछि उपचार भन्दा पनि मिर्गौला रोग लाग्नबाट सचेत बनाउन यो रोग लाग्ने कारण र बच्ने उपाय बारे मानिसलाई सचेत गराउनु आवश्यक छ।
मिर्गौला रोग : पहिचान,रोकथाम र उपचार
तपाईँमा निम्न समस्या भएमा मिर्गौला रोग लाग्ने सँभावना रहन्छ-
के तपाईँमा उच्च रक्तचाप (Hypertension) छ ?
के तपाईँलाई मधुमेह रोग छ ?
के तपाईँको परिवारमा मृगौलाको रोग छ ?
के तपाईँको तौल अत्यधिक बढी छ ?
के तपाईँ धुम्रपान गर्नुहुन्छ ?
के तपाईँको उमेर ५० बर्ष भन्दा बढी छ ?
मिर्गौला रोगको पहिचान कसरी गर्ने?
प्रारम्भिक अवस्थामा मिर्गौला रोगको कुनै पनि लक्षण देखिँदैन । यस रोगका लक्षण देखिँदासम्म मिर्गौलाको काम ९०% भन्दा बढी कम भइसकेको हुन्छ ।
मिर्गौला रोगका लक्षणहरु निम्न बमोजिमका हुन सक्छन्-
गोडा र पैताला फूल्ने, जीउ फत्रक्क गल्ने र केही गर्न मन नलाग्ने, सोचाइमा कमी आउने, खानामा अरुची हुने र वाक्वाकी लाग्ने, पिसाबमा फिँज देखिने, राती सुत्दा स्याँ स्याँ हुने आदि
मिर्गौला रोगको पहिचान सामान्य परीक्षणबाट पनि गर्न सकिन्छ-
पिसाबमा प्रोटिनको जाँच गरेर
रगतमा क्रियाटिनिनको परीक्षण गरेर
पेटको अल्ट्रासाउण्ड गरेर ।
मिर्गौला रोगबाट बच्न अपनाउनु पर्ने ८ सुनौला उपायहरू
आफुलाई स्वस्थ र सक्रीय राख्नुहोस्
आफ्नो रगतको मात्रालाई नियन्त्रण गर्नुहोस्
नियमित रक्तचापको परीक्षण गराउनुहोस्
स्वस्थ आहार खानुहोस् र शारीरिक तौललाई नियन्त्रण गर्नुहोस्
प्रशस्त झोलिलो खानेकुरा खानुहोस्
आजबाटै धुम्रपान गर्न छाड्नुहोस्
जीउ दुखेमा खाने पेनकिलर औषधीको सेवन नगर्नुहोस्
आफुमा निम्न अवस्था भएमा ६-६ महिनामा नियमित मिर्गौला परीक्षण गराउनुहोस्-
अत्यधिक मोटोपन भएमा
बाबु आमा दुईजना मध्ये एक जनामा मिर्गौला रोग भएमा
बर्षमा एक पटक मिर्गौला जचाऔँ
जस्तोसुकै शारीरिक अभ्यास गरेपनि र खानपीनमा ध्यान दिएपनि वर्षमा एक पटक मिर्गौला जाँच गराउनुपर्छ। मेरो मिर्गौला स्वस्थ छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन बर्षमा एक पटक मिर्गौलाको परीक्षण गर्नुपर्छ। रगतमा क्रियाटिनन र पिसाबमा एलोमिन जाच्नुपर्छ। मिर्गौलामा रोग लागेको लक्षण थाहा हुँदैन।
मानिसहरु मिर्गौलाको समस्याले धेरै नै गालेपछि सुत्न, खान र दैनिक क्रियाकलाप गर्न नसक्ने भएपछि मात्र अस्पतालमा देखाउन आउँछन्। यस्तो अवस्थामा मिर्गौलाको उपचार गर्न ढिलो हुन्छ र मिर्गौला धेरै बिग्रिसकेको हुनसक्छ।
बदलिँदो जीवनशैलीका कारण हामी आफैले मिर्गौलाको समस्या हुने जोखिम निम्त्याइरहेका छौं। मिर्गौलामा रोग लागेको लक्षण थाहा हुँदैन। सुरुमा नै मिर्गौला रोग पत्ता लागेमा समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ।
विरामी धेरै नै अशक्त भएर अस्पताल आउने हुँदा यस्तो अवस्थाका बिरामीलाई कि डाइलाइसिस गर्नुपर्छ या मिर्गौला नै प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ। यी दुई कुरामध्ये एक गर्न सकेनौं भने विरामीको मृत्यु हुन जान्छ। त्यसैले यो डरलाग्दो स्थितिमा नपुग्नको लागि मानिसले समयमानै ध्यान दिनुपर्छ।
नेफ्रोलोजी यूनिट, चितवन मेडिकल कलेज